Batisa jona 2012 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Nifarana tanteraka tamin’ny volana mai 2012 lasa teo ny fampianara Apokalypsy izay nandeha tao amin’ny radio fanambarana Antananarivo fm 98.4 mhz. Toy ny mahazatra dia tamin’ny alalan’ny batisa lehibe no namaranana.
Tao aorian’ny tany amin’ny faritra atsimo (Fianaratsoa, Ambositra, Antsirabe sns) dia anjaran’ny fiangonana Apokalypsy teo amin’ny rezionaly Antananarivo indray no namarana ny fampianarana Apokalyspy izay nandeha tao amin’ny Radio Fanambarana. Araka izany dia nisy ny batisa lehibe izay notontosaina ny sabata 09 jona 2012 lasa teo. Tetsy Andranotapahina Ambohidratrimo no nanatontosana izay batisa lehibe izay ka teo amin’ny 800 mianadahy teo no niroso tamin’izany. Nanamafy ny fampianarana tao amin’ny Radio Fanambarana ny kaoferansa lehibe natao tamin’ny alahady 03, Alarobia 05, Alakamisy 06 ary zoma 07 jona 2012, ary samy tetsy amin’ny foibe Apokalypsy Ambodinisotry avokoa no nanatontosana izany. Mbola ny pasitera Mailhol hatrany no nitarika io kaoferansa io. Tao anatin’izany no nitondrany fanazavana ny baiboly tamin’ny lafiny matematika, fizika, ary siansa sy ara-panahy. Batisa faha 3 tamin’ity taona 2012 ity no tontosa ny sabata 09 jona 2012 lasa teo ka raha atambatra dia eo amin’ny 1870 mianadahy teo no vita batisa teo anivon’ny fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo tao anatin’ny enim-bolana.
Raha sitrapon’Andriamitra dia any Mahajanga indray no hanatanterahana ny famaranana manaraka izay mbola iarahana amin’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol hatrany. Ny sabata 07 jolay 2012 ho avy izao no hanatontosana izany any an-toerana. Ho avy hanao rodobe amin’io fotoana io ihany koa ny fiangonana Apokalypsy eo anivon’ny rezionaly Antananarivo sy ny manodidina.
Fivoriam-be faharoa eo amin’ny fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo
Satria niaraka nanomboka avokoa ny fampianarana Apokalypsy tao amin’ireo Radio Fanambarana rehetra manerana an’i Madagasikara, dia efa saiky vita avokoa izany amin’izao fotoana izao ary efa nanomboka ihany koa ny famaranana izany.
Mialohan’ny fitetezam-paritra ataon’i Pasitera Mailhol sy ireo delegasiona miaraka aminy àry, dia hisy ny fivoriam-be eo amin’ny fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo ny sabata 16 jona 2012 ho avy izao. Etsy amin’ny fiangonana Apokalypsy Ambohimarina Itaosy no hanatontosana izany, ary hisy ihany koa ny firaisana latabatra amin’ny Tompo amin’io fotoana io. Ankoatra izay dia hiaraka hanamarika ny tsingerin-taona faha 52 an’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol ihany koa ny fiangonana rehetra amin’io sabata io. Ao anatin’izay fanamarihany ny faha 52 taona nahaterahany izay indrindra dia hisy ny fanomezana hatolotry ny ray aman-dreny pasitera Mailhol ho an’ny mpihaino ny Radio Fanambarana rehetra ny zoma 15 jona 2012 ho avy izao. Amin’ny 07h30 hariva tsy diso no hanarahantsika izay fanomezana hafa kely izay ao amin’ny radio fanambarana Fm 98.4 MHz.
Araka ny efa nampahafantarina antsika dia efa mandeha amin’izao fotoana izao ny web radio an’ny Radio Fanambarana. Noho izany indrindra dia hiverina tsy ho ela indray ny fampianarana Apokalypsy izay noentin’i pasitera Mailhol. Raha sitrapon’Andriamanitra dia hanomboka ny Alahady 01 Jolay 2012 ho avy izao izany. Isaky ny amin’ny 10h00 alina sy amin’ny 06h00 maraina, ary amin’ny 10h00 atoandro sy amin’ny 04h00 ariva (ora Madagasikara) no hanarahantsika izay fampianarana izay.
Fivoriana Nasionaly 2012